Salady voankazo sy paty - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Salady voankazo sy paty
paty20 minitraOlona 4
ny Elena Calderon
Manolotra anao izahay anio takelaka mazava vaovao sy tena tany am-boalohany. Toy izany koa ity salady voankazo sy paty ity.
Amin'ny fahavaratra, miaraka amin'ny hafanana, maniry bebe kokoa izy ireo ity karazana salady ity izay manambatra paty sy voankazo na legioma. Izy ireo koa dia manompo an'i tandremo ny tsipika ary mihinana salama.
Tena tiako ny vinaigrette voasary ho an'ity lovia ity. Tsy manampy vinaingitra aho, fa azonao atao ny manisy tsiranoka raha mbola vinaingitra malefaka io.
1 Salady voankazo sy paty
Salady miorina amin'ny voankazo iray tany am-boalohany mba hankafizinao amin'ny fahavaratra.
Fotoana hiketrehana: 20M
Fotoana manontolo: 20M
Ho an'ny salady:
Paty miloko 250 g (akorandriaka, tulips, tsipìka, spiral sns)
Rano 800 g
Menaka oliva 1 sotro
Sira 1 sotrokely
Voaloboka tsy misy voa
Fromazy 12 avy any Burgos
Ho an'ny vinaigrette voasary:
Ranom-boasary 100 g
Apricot maina 8
50 g an'ny voaloboka maina
50 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
1 sotrokely (haben'ny tsindrin-tsakafo) vinaingitra malefaka (tsy voatery)
sira sy dipoavatra
Voalohany, mahandro ny paty izahay ary noho izany dia ampidirinay ao anaty vera ny rano, ny sotro misy menaka oliva sy ny sotrokely sira. Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Izahay dia manampy ny paty amin'ny alàlan'ny tsimok'aretina (tsindrio ny bokotra mizana mba hahafahana mandanja azy amin'ny fotoana ampiantsika azy) ary manamboatra ny fotoana voalaza amin'ny fonosana pasta, ny hafanana 100º ary ny hafainganam-pandehan'ny sotro. Matetika aho mametraka 10 minitra
Mandritra ny fandrahoan-tsakafo ny paty, manasa, manaratas ary manapaka kely ny voankazo izahay. Notehirizinay tao anaty lovia lehibe io.
Isika dia manary ny paty amin'ny alàlan'ny harona ary mitazona ao anaty vilia, miaraka amin'ireo voankazo.
Manasa sy manadio ny vera izahay.
Apetraho amin'ny lolo ny lolo ary arotsaho ao anaty vera ny akora rehetra: ny ranom-boasary, ny menaka oliva fanampiny, ny apricots maina, ny voaloboka, ny sira, ny sakam-boasary ary ny vinaingitra vinaingitra (tsy voatery atao ).
Afangaro mandritra ny 30 segondra, amin'ny hafainganam-pandeha 2.
Ampianay ity vinaigrette ity, miaraka amin'ny apricots sy voaloboka maina, ao anaty lovia miaraka amin'ny paty sy ny voankazo. Izahay dia manampy ny fromazy avy any Burgos ary mifangaro ny zava-drehetra.
Azontsika haingoina ravina mintara izy io.
Raha te hahalala fomba fahandro mora paty amin'ny Thermomix® ianao azonao arahana ity fomba fahandro ity izay hanondroantsika ny fomba fahandro paty 250 g na paty 500 g.
Fanazavana fanampiny - Pasta mamy sy salady voankazo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Salady sy legioma, Tsotra, General, Latsaky ny adiny 1, Resipeo amin'ny fahavaratra, fitondrana, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Salady voankazo sy paty
CARMEN dia hoy izy:
TIA SALADS. MANKASITRAKA ZAVATRA IZAO
Valiny amin'i CARMEN
Manantena aho fa tianao izany, Carmen, hoy ianao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Monica dia hoy izy:
Silvia, fantatro fa tsy misy ifandraisany amin'ny fomba fahandro ity, fa manantena aho fa afaka manampy ahy ianao. Nividy lafarinin-katsaka efa nomanina aho satria te-hanao mofo katsaka hatramin'ny nanandramako azy tany Portugal. Fantatrao ve ny fomba fahandro?
Misaotra tamin'ny bilaoginao mahafinaritra, asa tsara.
Mamaly an'i monica
Salama Monica, apetrako amin'ilay rohy ilay rohy: http://www.recetario.es/receta/1499/pan-de-maiz.html. Miarahaba ary tena faly aho fa tianao ny bilaoginay.
Tuna sy mofomamy asparagus fotsy